Sina Manatsara ny ozinina karbonika mavesatra sy mpanamboatra | Soavaly tsiroaroa
Manatsara karibonetra kalsioma mavesatra
Ny karbaona kalsioma kalitao mavesatra dia voahodina avy amin'ny kalite voajanahary madio. Ny singa fototra dia CaCO3. Manana fananana simika somary marin-toerana izy io, saika tsy zakan'ny rano, firafitry ny kristaly matevina, ambonin-javatra malefaka, haben'ny poti-panamiana, fahombiazan'ny fanodinana tsara, ary ny fidiran'ny menaka DOP ambany.
Atiny CaCO3% ≥
Notazonina tamin'ny 325 Mesh,% ≤
Fitrohana solika g / 100g
HCL amin'ny solubles,% ≤
Fotsy fotsy ≥
Haben'ny potika D50μM
Isa harato: 325 harato 600 harato 800 harato 1250 harato 2000 harato 3000 harato 6000 harato (azo atao namboarina arakaraka ny takian'ny mpanjifa ny fineness)
Fanamarihana: Ireto voalaza etsy ambony ireto dia angon-drakitra fanovozan-kevitra, ary ny masontsivana momba ny vokatra manokana dia mifototra amin'ny tatitry ny fitsapana nataon'ny orinasa.
Ny karbaona kalsioma mavesatra dia ampiasaina amin'ny fonosana, plastika, plastika calcium vaovao, tariby, fanaovana papermaking, kosmetika, vera, fanafody, loko, ints, tariby, insulation power, sakafo, lamba, feed, adhesives, sealants, aspalto, fitaovana fananganana ampiasaina ho toy ny famenoana fitaovana amin'ny vokatra toy ny valindrihana tsy misy afo sy vato artifisialy.
Tombontsoa azo avy amin'ny gazy karbonika superfine:
Ho fanampin'izany, ny avo kokoa ny lanin'ny fitrohana solika ny karbaona kalsioma ultra-fine ho an'ny rubber, ny tsara kokoa sy ny fanamafisana ny calcium carbonate ho an'ny rubber. Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia hita fa amin'ny endriny kristaly misy kalsioma ultra-fine, carbonate calcium ultra-fine toy ny rojo dia misy vokany tsara indrindra amin'ny fingotra.
▮ Famonosana sy fitehirizana
Fonosana: kitapo plastika vita amin'ny taratasy 25kg sy kitapo 500kg ary 1000kg taonina, azo afeno arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.
Mitahiry: Mitahiry amin'ny toerana misy rivotra sy maina amin'ny andiana. Ny haavon'ny vokatra dia tokony tsy mihoatra ny 20 sosona. Fady mafy ny mifanerasera amin'ireo entana taratry ny vokatra ary mifantoka amin'ny hamandoana. Rehefa mamoaka sy mamoaka, azafady ento ary esory moramora mba hisorohana ny fandotoana sy ny fahasimban'ny fonosana. Ny vokatra dia tokony harovana amin'ny orana sy ny tara-masoandro mandritra ny fitaterana.
Previous: Barium sulfate ho an'ny lokon'ny solika
Manaraka: Carbonate calcium calcium
Carbonate an'ny tabilaon'ny kalsioma
Carbonate kalsioma mavesatra avo lenta
Carbonate kalsioma vovoka ho an'ny fitrandrahana solika
Karbaona calcium Nano mihetsika
Carbonate calcium calcium mahery
Carbonate calcium calcium
Kalsioma karbonika mavesatra